Lahatsary natolotra - Ny Foundation Reward - Fitiavana, firaisana ara-nofo ary ny Internet
Home Resources Recommended Videos
Ny lahatsary dia fomba haingana ahafahana miditra amin'ny siansa fototra momba ny voka-dratsin'ny fijerena sary vetaveta amin'ny Internet.
Ireto misy soso-kevitra. Tsy misy pôrnôgrafia izy ireo.
Mary Sharpe dia manolotra ny asan'ny The Reward Reward ao Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto (mandeha ny fotoana 2: 12)
Tamin'ny taona 2016, mpikambana ao amin'ny The Reward Foundation dia niresaka tamin'ny Konferansa Iraisam-pirenena faha-3 momba ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia ao Istanbul, Torkia. Darryl Mead dia niteny Ny risika atrehin'ny tanora rehefa lasa mpividy pôrnôgrafia izy ireo (fotoana fihazakazahana 12.07). Nijery i Mary Sharpe Ady amin'ny tontolon'ny porn addiction (mandeha ny fotoana 19.47). Niresaka momba izany ny mpikaroka momba ny fikarakarana honohono, Gary Wilson Ny fanesorana ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet dia mampiseho ny vokany (mandeha ny fotoana 17.24).
Ny famoizana ny lehilahy
Ny psikology ao amin'ny Oniversite ao Stanford Philip Zimbardo dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fieritreretana ireo fitaomana izay mahatonga ny zazalahy tsy hahomby amin'ny fianarany. Ao amin'ny 'Ny famoizana ny lehilahy'manontany izy hoe maninona no toa mihena ny fahombiazan'ny zazalahy amin'ny tontolon'ny maoderina (fe-potoana 4:43).
Tamin'ny 2012 Gary Wilson dia namaly ny fanambin'ny Philip Zimbardo tamin'ny 'The Great Porn Experiment'. Izy io dia mamaritra ny porofon'ny fanjifàna sary vetaveta amin'ny Internet ho iray amin'ireo mety ho fihenan'ny fihenan'ny fahombiazan'ny zazalahy amin'ny ankapobeny. 'The Great Porn Experiment' izao dia nojerena tao amin'ny YouTube maherin'ny 13.7 tapitrisa ary nadika tamin'ny fiteny 18 (fotoana fandefasana 16:28).
Ny atidohanao amin'ny pôrnô: Ahoana ny fiheveran'ny Internet Porn ny atidoha?
Ity fampisehoana lahatsary 2015 ity dia vaovao farany ary fanitarana ny resaka TEDx tany am-boalohany an'i Gary Wilson (fotoana fandehanana: 1 ora 10 min).
As dysfunction erectile levitra dia iray amin'ireo olana mampahonena indrindra ho an'ny zatovolahy sy ny mpivady, mendrika ny mijery ity fampisehoana avy amin'ny 2014 ity mba hahatakatra ny zava-mitranga ao amin'ny atidoha sy ny génitals rehefa miresaka fitaovana mahery vaika. Azo sitranina amin'ny ankamaroan'ny tranga izany mandritra ny volana maromaro rehefa miala amin'ny pôrnôgrafia ny mpampiasa iray ary mamela ny atidoha hiasa (fotoana fandehanana: 55: 37).
Ny Siansa Fanampiana Pornography
AsapSCIENCE no namorona ity tabilao tena azo idirana ity. 'Ny Siansa Fanampiana Pornography'dia famintinana mazava ny amin'ny fomba sy ny antony mahatonga ny pôrnôgrafia mety hampiankin-doha (running time 3:07).
Mamoatra ny vokatry ny pôrnôgrafia
Gary Wilson dia mandray antsika amin'ny fomba izay mety hamokarana sary tsy dia mahazatra loatra amin'ny vokatra ara-pahasalamana amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet (fotoana 6: 54).
Mamoatra ny Internet amin'ny Internet ny Internet
Raha liana amin'ny endri-javatra tsy manam-paharoa ao amin'ny ati-dohan'ilay tanora ianao hatramin'ny taona 12-25 taona sy ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet an'io ati-doha saro-pady io, jereo ity fampisehoana ity (vanim-potoana: 33 mins).
Mangataha ny Neurosurgeon momba ny fiantraikan'ny Internet Porn eo amin'ny atidoha
Izany lalina izany TV interview miaraka amin'ny neurosurgeon Dr. Donald Hilton dia mendrika mijery (fotoana fandehanana: 22: 20).
Lahateny lehibe TEDx mijery ny siansa fototra amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia no Douglas Lisle's 'The Pleasure Trap'(fotoana hazakazaka 17:10).
Ny fahasamihafana eo amin'ny fahafinaretana sy ny fahasambarana
Amin'ity horonantsary nataon'ny University of California TV antsoina hoe “Ny famatoran-tsain'ny Amerikana", Robert H Lustig, neuro-endocrinologist dia nanazava amin'ny teny tsotra ny fahasamihafana misy eo amin'ny fahafinaretana sy ny fahasambarana amin'ny maha-fiasan'ny dopamine sy serotonin ao amin'ny ati-doha. Mijery ny fiainana isan'andro sy ny antony manosika sy manintona izay misy fiantraikany amin'ny laharam-pahamehantsika ho tsara na ho ratsy. Io dia mamintina ny boky vaovaony "Ny fanapahana ny sain'ny amerikana: ny siansa ao ambadiky ny fakana orinasa amin'ny ati-doha sy vatantsika. (Fotoana hazakazaka: 32:42).
Te hahafantatra momba ny fanekena sy ny firaisana? Rahoviana no 'tsia' midika hoe 'TSIA!' Jereo amin'ny 'A Cup of Tea'(kinova madio, Fotoana hazakazaka 2:50).
Te hahita bebe kokoa?
Toerana tsara hijerena ny 'yourbrainonporn.com'izay nanangonan'i Gary Wilson rohy tsara ho an'ny video mahasoa kokoa momba ny siansa amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia.